अर्धचालक ट्रांजस्टर र विद्युत रिले - आधुनिक विद्युत ईन्जिनियरिङ् को आधार भन्दा योजनाहरु दुई मुख्य तत्व आधारित छ। हामी मानसिक यी दुई आविष्कार हटाउन भने, यो मानिसजातिको पछि इतिहास के भएको थियो कल्पना गर्न गाह्रो छ। सायद, यो सायद, त्यसको विपरीत, प्रगति व्यवस्थित विकास पथ पछ्याएका छन् थियो मध्य युग वरिपरि विकसित हुनेछ गरिएका छन्, र, जैविक प्रणाली को। तर हामीलाई यी विचार विज्ञान कल्पना लेखकहरूले छोड्न गरौं। एउटा कुरा स्पष्ट छ: सबै विद्युत ईन्जिनियरिङ् लागि विद्युत रिले आधुनिक परिवहन लागि आन्तरिक दहन इन्जिन को कि जस्तै हो। छ - एक अपरिहार्य अंश।
कसरी विद्युत रिले गर्छ?
यो क्षेत्रीय तत्व को डिजाइन धेरै सरल छ। यो आफ्नो उच्च विश्वसनीयता भन्छन्: केही उद्योगहरूमा अझै पनि रिले 1940 मोडेल वर्ष संचालित।
विद्युत चुम्बकत्व - संरचना वर्णन अघि, भौतिक को व्यवस्था को एक सम्झन गर्न आवश्यक छ। एक चुम्बकीय क्षेत्र - यो जो मार्फत बिजुली वर्तमान प्रवाह, त्यहाँ कुरा को एक विशेष प्रकारको कुनै पनि सामाग्री वरिपरि कि ज्ञात छ। यसको बल (संभावित) दुई प्यारामिटर निर्भर: को बगिरहेको वर्तमान र सञ्चालकको लम्बाइ को मूल्य। यो प्रत्येक एकाइ को लम्बाइ एक क्षेत्र उत्पन्न भने, सञ्चालकको, अधिक उच्चारण चुम्बकीय प्रभाव बढी छ भन्ने स्पष्ट छ। यो भने यस्तो सञ्चालकको संग अर्को एक धातु वस्तु स्थित छ, त्यसपछि यसलाई प्रभावित गरिनेछ भन्ने हो गुरुत्वाकर्षण। आफ्नो मूल्य पर्याप्त हुनेछ भने, वस्तु उत्प्रेरित गर्नेछ। स्पष्ट दुवै: कंडक्टर को लम्बाइ वृद्धि गरी क्षेत्र तीव्रता वृद्धि धेरै सुविधाजनक छैन - उपकरण संकुचित हुनुपर्छ, र कुल क्षेत्र सदिश एक बिन्दुमा ध्यान गर्न र प्रवाहकीय सामाग्री साथ sprayed छैन। वर्तमान पनि अविवेकी, वृद्धि यसलाई अत्यधिक ताप र सामाग्री को गैर-इष्टतम प्रयोग गराउँछ देखि। तर, समाधान छ।
यो तार को कुनै प्रत्यक्ष आवेदन, र तार कोर छ। यो एउटा सानो मात्रा गर्न पातलो तार को किलोमिटर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
विद्युत रिले केवल तार भित्र comprises। संरचना को दोस्रो भाग - विशेष स्वतन्त्रताको एक डिग्री भइरहेको आकारको धातु थाली। त्यो, त्यहाँ एक हुँदा छ चुम्बकीय क्षेत्र, को प्लेट को तार को अन्त अनुहार आकर्षित छ। हालको प्रभाव को लापता साथ ceases र फिर्ती वसन्त यसको मूल स्थिति गर्न थाली फाल्नुहोस्।
चल्ने सम्पर्क समूह - पट्टी मा स्थिर पुल आकर्षित गर्छ। तिनीहरूलाई को दोस्रो (rigidly तय) अर्को छ। को प्लेट विस्थापित हुन्छ, सम्पर्कहरू बन्द छन्। तिनीहरूले सर्किट समावेश छन् भने, तार को सञ्चालन नियन्त्रणमा छ जडान सर्किट स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो काम विद्युत रिले छ। सोही, निश्चित सम्पर्क प्रबन्धको विधि आधारमा तिनीहरूले सामान्यतया बन्द गर्न सक्छ (कांग्रेस गर्दा चुम्बकीय क्षेत्र) र सामान्य खुला (श्रृंखला सङ्कलन)।
विद्युत रिले एसी डिजाइन विशेष तार सञ्चालकको जसको क्षेत्र हालको आवृत्ति को प्रकृति कारण rattling रोक्छ समावेश छ।
आगो मंत्रिमंडलों बारेमा सामान्य जानकारी
वाग्नर ( "वाग्नर") - विद्युत स्प्रे बन्दूक (जर्मनी): संचालन निर्देश
ग्रिल कोइला। BBQ ग्रिल। समीक्षा, मूल्य
जैकेटको प्रकार सबैभन्दा सान्दर्भिक विकल्पहरू
Megrels को हुन्? तिनीहरू बाँच्न, भाषा, संस्कृति
आहार-झोला "एक हप्ता Borodina मा वजन": उपभोक्ता समीक्षा, संरचना र प्रणाली को पोषण विशेषताहरु